Ukuphupha Amakhandlela Kunokuba Yingozi! [ Mhlophe / Bomvu / Lit ]
kuqala » Amaphupha » phupha malunga nekhandlela
Uyazi kuthetha ukuthini ukuphupha ikhandlela elimhlophe, eliluhlaza okwesibhakabhaka, elibomvu okanye elimnyama? Kuthekani ukuba ivuliwe okanye icinyiwe?
Ayinamsebenzi, awuyazi kuba ngethamsanqa ufike kwindawo elungileyo!
Siza kukubonisa ukuba kutheni ube neli phupha kunye nomyalezo onokuthi ufune ukuwudlulisela kuwe.
Yinyani, i amaphupha inokudlulisela imiyalezo ebalulekileyo kubomi bethu.
Kule meko isenokuba ithetha nawe ngobomi bakho bemali, ngothando lwakho nangempilo yakho.
Wonke amaphupha anentsingiselo, yiyo loo nto sagqiba ekubeni sipapashe ngezantsi zonke iimeko ezinokubakho.
Zihlole zonke ngoku!
phupha ngekhandlela elimhlophe
Ikhandlela elimhlophe lisetyenziswa ngokubanzi kwiimpawu ezahlukeneyo ezinxulumene nemali.
Ukuphupha ikhandlela elimhlophe lihambelana ngqo nenhlanhla kwimali, ngenhlanhla ngenhlanhla.
Ungazilungiselela kuba elona nqanaba libalaseleyo kubomi bakho bezemali liyasondela.
Kuza kubakho isitofu esikhulu semali kungekudala.
Ngokuqhelekileyo into efana nelifa, intengiso yexabiso elikhulu, isipho esixabisekileyo okanye isenokuba yimali ezuzwe kukhuphiswano.
Ingqalelo yokuba eli phupha alibonisi ukunyuka komvuzo.
Yinaliti yemali enkulu kunaleyo, amawaka ambalwa ubuncinane.
Kusenokubonakala kukuhle kakhulu, kodwa inyaniso kukuba oku kwaba sisiphumo sobungqina obuninzi ababenalo eli phupha.
ukuphupha ikhandlela elivuthayo
Ikhandlela elikhanyisiweyo limela isiqalo sento ethile.
Emaphupheni imele isiqalo sento entle ebomini bakho kwaye eso siqalo simiselwe kungekudala!
Kungekudala uza kuqala into entsha, inokuba lishishini, ubudlelwane obutsha okanye inokuba sisiqalo somsebenzi onempumelelo wobuchule.
Yintoni eqinisekileyo kukuba uya kwenza umahluko kumaxesha azayo kwaye oku kuya kunceda ubomi bakho ngendlela engakholelekiyo.
Kwalayita ikhandlela elimhlophe luphawu lokukhanya, uxolo kunye nokuzola.'
Ungajonga phambili kuninzi kolo xolo, lukhulu olozonzolo kunye nokukhanya okuninzi.
Eli phupha lihle kakhulu kwaye limele izinto ezilungileyo kuphela, ukuphupha ikhandlela elikhanyisiweyo lihlala libonisa okulungileyo, ngaphandle kokuba kumnyama.
Ukuba ikhandlela limnyama, qhubela phambili kancinci kwinqaku kuba siya kuchaza intsingiselo yalo ngezantsi.
ukuphupha ikhandlela elimnyama
Ikhandlela elimnyama lidibaniswa nemimoya emibi kunye namaxesha amabi.
Kule meko ukuphupha ikhandlela elimnyama ngumqondiso ombi wamashwa kunye namaxesha amabi ebomini abangelwa ngumntu.
Kuthetha ukuba kuya kubakho umntu ozama ukutshabalalisa ubomi bakho.
Ngelishwa, lo mntu uya kufumana into, ukuba akunjalo, uya kukwazi ukuba uxolo lwakho noxolo.
Ikhandlela elimnyama liphawu lomlingo, njengoko sele sitshilo, kwaye linokufanekisela ukuba umntu wenza umlingo omnyama ukuzama ukukwenzakalisa.
Ukuba ikhandlela lilayitiwe kuthetha ukuba usebenza ngokungonwabi kwakho ngoku.
Qaphela ngombala omnyama emaphupheni, ngumbala ombi ongaqhelekanga ukutsala izinto ezintle.
Zama ukuthandaza okanye ukuhlamba, sisisombululo esifanelekileyo kwezi meko zinzima.
ukuphupha ikhandlela elibomvu
Ngokuqhelekileyo wonke umntu uyazi ukuba ubomvu budibene nothando!
Ikhandlela elibomvu libonisa uthando emaphupheni, kule meko indlela yothando olutsha oluya kutshintsha ubomi bakho.
Iphupha linokuba neemeko ezimbini ezahlukeneyo, kuya kuxhomekeka ekubeni unobudlelwane okanye awukho.
Ukuba usebudlelwaneni oko kuthetha ukuba uya kuba nesimangaliso esikhulu esinxulumene nothando.
Lo mmangaliso unokuba sisipho esixabisekileyo, ingxelo entle okanye kwanesicelo somtshato!
Nokuba yintoni na iya kukuvuyisa, kakhulu!
Ukuba awutshatanga, imeko iyatshintsha...
Kuthetha ukuba kuya kubakho umntu oza kusondela ebomini bakho.
Le ndlela iya kuba yinto entle ebomini bakho, iya kukuzisela uthando oluninzi kunye nolonwabo.
Zama ukuwenza kangangoko umzuzu noyena mntu umthanda kakhulu, ungachithi nakancinci kuba amaxesha anjengala awafiki yonke imihla!
Ukuphupha ikhandlela elityheli kunqabile kakhulu, kodwa inyaniso kukuba kukho abantu abanalo eli phupha.
Ukuba ubunayo, yazi kwangoko ukuba inxulumene nobuntu bakho.
Kuthetha ukuba uethe-ethe kwaye kulula ukulimaza kwaye akusoloko kuyinto elungileyo.
Umntu oethe-ethe usoloko engumntu onokuthi enzeka lula nanini na.
Eli phupha likuxelela ukuba kufuneka uzame ukomelela, ukuqina kwaye uzingise ngakumbi ebomini.
Ngamanye amaxesha kuvela imiceli mngeni efuna onke amandla ethu kwaye kufuneka sisoloko silungele nantoni na ezayo kwaye iza.
Ukuba ikhandlela eliphuzi likhanyisiwe, kuthetha ukuba kungekudala uza kujongana nemingeni eya kubeka ubuthathaka bakho kuvavanyo.
Hlala ubukele, imiceli mngeni isenokuba isendleleni!
Ikhandlela elihlaza okwesibhakabhaka lifanekisela ubukho beemvakalelo ezimbi ngaphakathi kwakho ezingenakwenzeka ukuba zihambe.
Ezinye zezi mvakalelo umsindo, unxunguphalo, uloyiko nokuchaswa.
Ezi mvakalelo ziqokelele ngokuhamba kwexesha ukusuka kumaxesha amabi ebomini bakho.
Ukuphupha ikhandlela elihlaza okwesibhakabhaka kuthetha ukuba awukakwazi ukunqoba zonke ezi zihlandlo kwaye awuyi kuba nako.
Zama ukusombulula oku kube kanye, okoko nje ungagqithisi kuzo zonke ezi zihlandlo zimbi kwixesha elidlulileyo, awuyi kukwazi ukuyeka ukuba namaphupha anjalo.
Xa ikhandlela litshaya, kungenxa yokuba phantse yonke into itshile kwaye ibisele ivaliwe.
Oku kufanekisela into enye kuphela... Uxolo!
Ubomi bakho buya kuhamba kwixesha elihle loxolo kunye nemvisiswano.
Iingxaki ziyakudlula, njengaye yonke into kunye nawo wonke umntu okukhathazayo.
Kuya kubakho into ebomini bakho eya kukwenza ulibale ngayo yonke into okwethutyana kwaye iya kuba yinto entle kakhulu!
Inokuba lubudlelwane obutsha okanye iholide elula kude nayo yonke into kunye nomntu wonke.
Yintoni eqinisekileyo kukuba uya kuba namaxesha amnandi oxolo kude nabo bonke abo bantu bafuna ukukwenzakalisa.
Ukuba uphupha nje ikhandlela lokutshaya, vuya, ngumqondiso obalaseleyo!
Olu hlobo lwephupha lubonisa ukuba uya kudlula kwinqanaba lokungaqiniseki okukhulu ngobomi.
Oku kungaqiniseki kunokunxulumana nezinto ezahlukeneyo.
Ngokuqhelekileyo nezigqibo ezibalulekileyo ebomini bakho.
Isenokuba kukungaqiniseki okunxulumene nolwalamano, utyalo-mali okanye kwanokukhetha umsebenzi omtsha.
Kule mizuzu kubalulekile ukucinga kakuhle kwaye ubeke zonke iingcamango kwindawo efanelekileyo.
Ukuthatha izimo zengqondo ezingachanekanga kulula kakhulu, ngakumbi ukuba zikwixesha lokungaqiniseki kunye namathandabuzo.
Ukuba uziva ngathi awukakulungeli ukwenza ezinye zezi zigqibo, khawume nje ixesha elide.
uphupha ukhanyisa ikhandlela
Ukukhanyisa ikhandlela yinto entle kuba uzisa ukukhanya ebomini bakho.
Ukuphupha ukhanyisa ikhandlela kuthetha ukuba uya kuba nexesha elihle ebomini bakho.
Akunakwenzeka ukukuxelela ukuba lo mzuzu uya kuba yintoni na, kunokwenzeka kuphela ukuthetha ukuba uya kuyithanda kwaye iya kukwenzela okulungileyo.
Ngamanye amaxesha la maphupha anxulumene nokufudukela kwinto elungileyo.
Isenokuba kukuhambisa indlu, ukufuduka kobudlelwane okanye naluphi na olunye utshintsho.
Nokuba yintoni na iya kuba ilungile kwaye yeyona nto ibalulekileyo.
Phupha ngekhandlela eliqhekekileyo
Eli phupha alinayo enye yeentsingiselo ezilungileyo kwihlabathi, kodwa kungcono ukulazi ngoku kunokuba ubanjwe ngokumangala.
Kuthetha ukuphela kobudlelwane kubaluleke kakhulu kubomi bakho.
Ukuphupha ikhandlela eliqhekekileyo lihambelana nokuphela kobudlelwane obubaluleke kakhulu.
Sifuna ukutsalela ingqalelo kuba olu lwalamano akuyomfuneko ukuba lube lothando, inokuba bubuhlobo okanye intsapho.
Hlalutya bonke ubudlelwane bakho kwaye ubone ukuba yeyiphi esemngciphekweni wokuphela.
Kusenokwenzeka ukuba kwenzeka into eya kuphelisa ulwalamano olukhethekileyo kuwe.
Akukho nto unokuyenza ukunqanda oku, kukuthetha ngekamva.
Kusele ukuba ulinde kwaye ulwe nazo zonke ezi ngxaki ngamandla akho onke.
phupha malunga nobisi lwebele
iphupha umvundla omhlophe
phupha irayisi ephekiweyo
phupha malunga nekhandlela inokuba namawaka eentsingiselo ezahlukeneyo.
Sizamile ukuzifaka zonke kweli nqaku, kodwa ukuba uphose naliphi na, ungalibazisi ukunxibelelana nathi.
1 phupha ngekhandlela elimhlophe
2 ukuphupha ikhandlela elivuthayo
3 ukuphupha ikhandlela elimnyama
4 ukuphupha ikhandlela elibomvu
5 ikhandlela elityheli
6 ikhandlela elibhlowu
7 ukutshaya ikhandlela
8 ikhandlela elinyibilikisiweyo
9 uphupha ukhanyisa ikhandlela
10 Phupha ngekhandlela eliqhekekileyo
NgoJulayi 24, 2018, 6: 44 pm
Ndiphuphe amakhandlela ayi 5 exhonywe esangweni lasekhaya, umakazi ebesenza amakhubalo wokhupha umfazi ondiphosele elinye, lomfazi uphelelwe ngumoya womntu endimaziyo kwaye ubhubhile uzofika and undixelele ukuba ebendingcungcuthekisa ngomyalelo wakhe, kuba ebesebenzisa izinto zakhe ngalonto... Uthe akugqiba umalumekazi ukuba agqibe lomlingo kwavela ilangatye livutha endlini yakhe kodwa lingatshi kwanto, elidangatya belifuna into. uye wafumana amakhandlela kula gate ndandiyifakile yavutha ingayeki ivutha amadangatya, umzala wazama ukuyicima kodwa yaphinda yavuka... Ngumakazi lo ukhwazayo esithi makavuthe ikhandlela elo. bekungamelanga andibone kuba khange afune mna... Kuba ngokwendlela endiyiqondayo ngayo ilangatye ibisisipela esingagqitywanga ebesijonge ekujoliswe kuko...
Ngomhla wama-25 kuMatshi 2019, 10: 37 am
Ndiphuphe umama ephethe ikhandlela elibomvu elayitelwe ukuba utata angamshiyi ndambhatala ngesandla ndabe ndiqonda ukuba usemoyeni waphuma nentombi yakhe esiya ezitshomini nentombi yakhe. Uthukile wavela umfazi emhlophe ebusweni saqala sacula indumiso weza kum